5 Inta badan sixraya Hidden GEMS In Belgium | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Inta badan sixraya Hidden GEMS In Belgium
Save A tareenka wuxuu idin keenayaa 5 Inta badan sixraya Hidden GEMS In Belgium booqashada! Waxaa dheeraad ah si Belgium badan biir kaliya. Baro qalcado xoodan, farshaxan qarsoon, iyo magaalooyinka aan weli on your radar laakiin gebi ahaanba waa in ay ahaataa! Belgium ayaa yaraanta ma dhagaxyo qarsoon oo aad ugu dhakhsaha badan dhici doonaan jacayl la.
1. Underrated City ayaa Of Mechelen
Mechelen kalabadhka waa u dhexeeya Brussels iyo Antwerp. bartamaha magaalada waxaa lagu gartaa gabled guryaha Renaissance, si taxadar leh dib loo soo celiyo, halka suuqa waxaa ku badan katedraalka Gothic hal dhinac oo hall magaalada, sidoo kale Gothic, oo dhinaca kale ah. Mechelen waxaa inta badan iska fududaysto ay guushu ku meelaha caanka more. Si kastaba ha ahaatee, xoqin dusha ka hooseeya iyo aad ugu dhakhsaha badan soo ban dhigi doonaa dejinta ah oo qurux badan Belgium in ka badan yahay qiimihiisu waqti aad halka dalka iyo hubaal mid ka mid ah In Hidden GEMS ee Belgium si ay booqasho!
Brussels si Tareenadu Mechlen
Antwerp in Tareenadu Mechlen
Ghent in Tareenadu Mechlen
Liege in Tareenadu Mechlen
2. Town Sugar The Of Tienen
Magaalada yar in waayeen (Iyada oo sonkor ah!) Hadii aad waligaa ku riyaaqay saaraayo sonkorta garab aad kafeega cusub ama koob oo shaah ah, ka dibna aan shaki ku jirin waxa laga yaabaa inay la soo baaraandegi doona magaalada yar ee Tienen. magaaladan yar uusan ka fogayn Leuven. Ka bax wadada la garaacay iyo qalbiga Flemish Brabant ee Flanders, dejinta markan ahaa wadnaha ee dhoobada Roman iyo qaadashada hal galaas! Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee ay tahay mid ka mid ah GEMS Hidden In Belgium in ay booqdaan!
Waxaa jira waxyaabo badan oo Tienen ka badan inta isha lagu arko. Fiiri ka baxsan kiniisadaha weyn ee cad. Qoo ilaa ambiance iyo muunad cunnada maxalliga ah (cunnada dhaqanka Vlaamse ka mid ah qabatooyin badan oo hilib-culus sida Digsi, doofar, iyo aleelada).
Muuqaal muuqda oo magaalada ka muuqda waa Sint Germanuskerk, kaniisad cajiib Romanesque kaalinta by a UNESCO belfry iyo shukaansi back to Qarnigii 13aad. Inta lagu guda jiro July iyo August, riwaayada carillon qaadan meel Wednesday kasta. Ku darso kalandarka!
Liege in Tareenadu Tienen
Brussels si Tareenadu Tienen
Antwerp in Tareenadu Tienen
Tareenada u leeyihiin in ay Namur
3. hoeilaart, Vlaamse Brabant
Waxaad si fudud u awooddo tareen iyadoo la kaashanayo Save A tareenka si ay u Brussels. Markaas waa soddon daqiiqo kortaan deg deg ah xagga koonfureed ee magaalada Hoeilaart. Halkan waxaad ka heli doontaa albaab u Forest Sonian iyo mid ka mid ah 5 Inta badan sixraya Hidden GEMS In Belgium si ay u booqdaan!
Haddaad jeceshihiin ogaado, waa saldhiga ugu fiican, ka baxsan Brussels mashquul. Booqo Forest Museum Jan van Ruusbroec, si ay u bartaan oo ku saabsan kaynta ka hor sahaminta mid ka mid ah jidadka socod badan.
Hoeilaart leeyahay jawharad kale oo qarsoon; waxay hoy u tahay canab ugu fiican Belgium. Hoeilaart, isagoo mar loo yaqaan magaalada galaaska sababta oo ah dhammaan koriyo oo Cinab ah ka buuxiyeen. Inkasta oo wax soo saarka ayaa sii dhinmaan, sanadihii la soo dhaafay, canab Hoeilaart ayaa weli qiimeeyeen ee wadanka oo dhan, oo waxay ka sii iibin soo baxay si deg deg ah, waxaa fiican inaad si toos ah u tagaan si ay isha si aad u hesho gacmahaaga iyaga on.
Lille si ay Tareenadu Hoeilaart
Brusseles in Tareenadu Hoeilaart
Antwerp in Tareenadu Hoeilaart
Liege in Tareenadu Hoeilaart
4. Jiidasho Hidden Gem – Tongeren, Limburg
Booqo Magaalada ugu da'da weyn ee Belgium. naaneesta A la siiyey ay sabab u tahay taariikhda hodanka ah Gallo Roman. Calaamadaha taariikhda this yihiin la arki karo magaalada oo dhan, laakiin barta ugu fiican waa abaalmarinta abaalmarinta ee Gallo Roman Museum. Marka aad adigu iskaa u gadaya oo ka soo bandhigaa interactive, jidadka ku garaacay mid ka mid ah is-hagayaasha socdaalada socdaalka si loo ogaado lakabyada taariikhda ee Tongeren.
Tani magaalada yar waxay leedahay laba taxadiri UNESCO ku qoran, belfry ee Basilica ee Our Lady iyo beguinage ah. Baro nolosha Beguines ah, haweenka isu heegan u ah kaniisadda, at Museum Beguinage ku Beghina. Axadaha, ciidammadu Tongeren Beneluxs suuqa ugu weyn oo qaraami ah, leh in ka badan 350 iibiyeyaasha iibiya waxyaalaha qadiimiga ah ee taariikhda oo dhan.
Haddii aadan weli helin wax aad ka dheregtaan ee la soo dhaafay 5 Inta badan sixraya Hidden GEMS In Belgium, joojiyaan at dhow Alden Beisen Castle for cabbayso iyada oo beerta picturesque rasmi ah.
Maastricht in Tareenadu Tongeren
Liege in Tareenadu Tongeren
Aachen in Tareenadu Tongeren
Bonn in Tareenadu Tongeren
5. Jiidasho Hidden Gem – Binche, Hainaut
Magaalada Binche ee gobolka Belgian ee Hainaut eg kale magaalooyin badan oo yar yar ee Wallonia. Waa nooc ka mid ah hurdo ah meel la mid ah oo waaweyn oo kaliya soo jiidashada dalxiiska, Museum fiican Caalamiga ah ee Damaashaadka iyo-gashiga, ama hooyo.
In maalmood ee horkacaya Ash Wednesday, Binche wax laakin hurdeysan. The Carnival of Binche waa mid gaar ah oo adduunka ah iyo hubaal jawharad qarsoon! Ixtifaalka ku lug dharka baahsan, music, cayaar, iyo waxoogaa cadaalad ah oo la cabbo iyo madadaalo! Waxaa si gaar ah dhab ahaantii, waxay ku qoran tahay masterpiece ah ee afka iyo carqabad ku Heritage ee Humanity by UNESCO.
Dhaqanka iyo xafladaha ekaan kartaa gebi ahaanba la garaneyn in dibadda, nasiib wanaag Hooyo jiro si ay u sharxaan wax walba si faahfaahsan cad. Dhigta ee Carnival of Binche waa run ahaantii a waayo-aragnimo aan la ilaawi karin.
Brussels si Tareenadu Binche
Antwerp in Tareenadu Binche
Lille si ay Tareenadu Binche
Reims in Tareenadu Binche
Diyaar u ah inuu ogaado 5 Inta badan sixraya Hidden GEMS In Belgium? Markaasuu madaxa ka badan si ay u Save A tareenka hadda. Book in daqiiqo oo aan kharashka qarsoon, GEMS kaliya qarsoon!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Inta badan sixraya Hidden GEMS In Belgium” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-belgium%2F – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#secretbelgium #travelbelgium #travelhiddengems europetrains europetravel hiddengem tareen safarka travelbelgium